Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် မှအကောင်းဆုံး Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
ကျနော်တို့ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်များမှာ Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် အတွေ့အကြုံအနှစ်ထက်မပိုနှစ်ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူအတွက်စက်ရုံ Taiwan ကျမတို့ဟာဒီထုတ်ကုန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ဖောက်သည်ဝယ်လိုအားအရသိရသည် Customize လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်အရေအတွက်ကကြိုဆိုနေပါတယ်။ ဘီလူးမအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကျွန်တော်အမြဲအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုဖြင့်သင်သည်ဈေးကွက်တွင်နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းများကိုဆက်ကပ်နိုင်ပါသည်။
ပုံစံ - AM-ICD-W
65 ကျော်ကိုသိမ်းပါ%ရေ,ရေနွေးငွေ့,လျှပ်စစ်ဓာတ်အား,နှင့်အရန်,65 လျှော့ချ%ရေဆိုးနှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏.
အဆိုပါစက်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်မူပိုင်ခွင့်သိရသည်,ယူရိုအပါအဝင်,ဦး.S.က.,ဦး.ငွေကျပ်.,အီတလီ,ဂျာမနီ,တရုတ်,ထိုင်ဝမ်,ဂရိ,ကြက်ဆင်,အိန္ဒိယ,ဂျပန်,ထိုင်းနိုင်ငံ,အင်ဒိုနီးရှား,မလေးရှား,ဗီယက်နမ်,ကိုရီးယား&မင်္ဂလာပါ;&မင်္ဂလာပါ;စသည်တို့.,200 ကျော်အပိုင်းပိုင်းမူပိုင်ခွင့်စုစုပေါင်း.၎င်းစက်သည်ထူးချွန်သောလုပ်ငန်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆုနှင့်ထိုင်ဝမ်အစိုးရမှထိုင်ဝမ်ထူးချွန်ဆုကိုရရှိခဲ့ပြီး ၄ င်း၏ထူးချွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စက်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအပေါ်တွင်ထားရှိမှုတို့ကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။.
ပိတ်ထည်ထဲကရေကျဆင်း,အထည်များသည်ပိုမိုပေါ့ပါးသောမိမိကိုယ်ကိုရေနည်းနည်းစုပ်ယူသည်-အလေးချိန်,ဒါကြောင့်အနိမ့် nozzle ဖိအားနှင့်အတူလျှင်မြန်စွာဖြန့်ဝေ.
ရေထည်ထဲကကျဆင်းသွားသည်,ရေအနည်းငယ်စုပ်ယူသောအထည်,အထည်များ၏ဆွဲငင်အားကိုလျှော့ချ,အနိမ့်တင်းမာမှုရရှိ,အစွန်းကောက်အခမဲ့.ထို့ကြောင့်,ဆေးဆိုးခြင်းမပြုမီ spandex နှင့် tricot အထည်များကိုချုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ.
ပွတ်တိုက်အားရှောင်ရှားရန် Teflon အပေါ်ယံပိုင်း.
ခ.Surfy လျှံသုတ်:လျင်မြန်စွာအမှုန်သို့မဟုတ် fluff အပေါ် floating ထွက်ဆေးကြော.
အအေးကိုပေါင်းစပ်,သုတ်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ Kier အဝတ်လျှော်–ဆေးဆိုးဆေး၏စုစုပေါင်းအချိန်ကိုတိုစေပြီးရေသုံးစွဲမှုကိုအနည်းဆုံးဖြစ်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.dyeing-machine.com/my/high-temperature-over-flow-rapid-dyeing-machine-2.html
အကောင်းဆုံး Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်၊ သင်သည် Flow Rapid Dyeing Machine ကျော်မြင့်မားသောအပူချိန် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်သူနှင့်စက်ရုံမှဖြန့်ဖြူးသူများ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်